सीमावासीका दुःखेसा सबैका साझा
नेपालको दक्षिणी र उत्तर सिमानाका जनताको मर्म दुःख एवम् दैनिक जीवनीका बारेमा नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । विशाल भू–भाग र जनसङ्ख्या भएको दुई देशले गरिरहेको तीव्र विकासबाट सिमानामा बस्ने नेपालीमा पर्न जाने असर बुझ्न जरुरी छ । दक्षिणतर्फ खुला सिमाना र रीतिरिवाजका कारण उत्तरभन्दा कम पीडा देखिन्छ ।
उत्तरतर्फको सिमाना बन्द भएको अनि अमेरिकी, युरोपियन मुलुकको चासो पनि भएको, एक चीनको अवधारणामा नेपाल पनि साथ र सहमति भएको हँुदा उत्तरतर्फको सिमाना सुरक्षा दृष्टिबाट पनि संवेदनशील देखिन्छ । उत्तरतर्फ भू–भाग पनि जटिल अवस्थाको छ । धेरै भू–भाग मानव बस्तीरहित छ । भएको मानव बस्ती पनि कष्टपूर्ण अवस्थामा छ । भू–भागका कारणले, विकासको न्यूनताका कारणले, राज्यको ध्यान कम गएका कारणले पनि त्यहाँका जनता बढी समस्यामा छन् । सामान्यतः राज्यको संयन्त्र पनि ती ठाउँमा उपस्थिति मनग्ये छैन । जनसङ्ख्या पनि न्यून छ । तसर्थ, नेपालको उत्तरी सिमानामा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
चीनसँगको दौत्य वा कूूटनीतिक सम्बन्ध पनि यही क्षेत्रका कारणले बलियो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि ओलाङचुङगोला नेपालको पूर्वी–उत्तर भू–भागबाट आवतजावत गर्ने चीनसँगको पुरानो नाका हो । बङ्गलादेशबाट वा समुद्रबाट नेपाल हँुदै चीन प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सहज नाका पनि यो हो । यो नाकामा पहिले पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीशको मुकामसमेत रहेको पाइन्छ । यो नाकाबाट चीनको तिब्बत प्रान्तमा समेत व्यापार भएको देखिन्छ । तिब्बतको यो भू–भाग र नेपालको ओलाङचुङगोलाका जनताको भाषा, संस्कृति, भेषभूषा पनि मिल्दोजुल्दो छ । यहाँका जनताका बीचमा विवाहसमेत चल्ने रीतिथिति थियो । अहिलेको स्थितिमा त्यहाँ जनताको सम्बन्ध बिस्तारै टाढिँदै गएको देखिन्छ । किनकि तिब्बतका जनतामा विकासका कारण आर्थिक स्थिति बलियो हुँदै गएको, चीनले नागरिकता विषयमा विवाहपछिको नीति कडाइ गरेको, आवतजावत गर्न सडक आदिका कारण कठिनाइसमेत भएको र विवाहपछि पनि आवतजावतमा निगरानी गरेका कारण बिस्तारै विवाह नहुने परिस्थिति आएको देखिन्छ । नेपालका त्यहाँका शेर्पाहरूको निश्चित व्यापार पनि नभएको, प्रायः खेती पनि नहुने, पशुपालनमा पनि विकास नभएको, राज्यको ध्यान पनि नगएको, यातायात, विद्युत्, सञ्चारका सुविधा पनि नेपालका ती भागमा नभएको हुँदा आर्थिक स्थिति पनि त्यहाँका जनताको दयनीय नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थाको ठीक उल्टो तिब्बतपट्टि यातायात, विद्युत्, सञ्चार, खेती, उद्योग आदिको विकासका कारण त्यहाँका जनताको आर्थिक स्तर पनि ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । यसबाट पनि नेपालको शेर्पा र चीनका शेर्पाबीच सम्बन्ध हुन वा विवाह हुन सजिलो देखिँदैन ।
ओलाङचुङगोलामा जन्मेका तर सबै प्रकारले विकसित भई त्यस ठाउँमा नबसेका केही व्यक्तिहरूको सक्रियतामा चीनको सिमानादेखि ओलाङचुङगोलासम्म करिब चौबीस किलोमिटर मोटरबाटोको ट्र्याक खोलेको रहेछ । यसको आर्थिक पक्ष पनि स्वयम् जनताले बेहोरेका रहेछन् । विदेशमा रहेका त्यहाँका बासिन्दाले करिब तीन करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेर चीनपट्टिकै डोजर प्रयोग गरेर चीनको सीमादेखि ओलाङचुङगोलासम्म बाटो बनाएकोमा वर्षाका कारण अहिले पुनः बाटो मर्मत गर्नपर्ने रहेछ । यो सडक करिब दुई महिनामा सम्पन्न गरेको देखियो । यही काम नेपालको सरकारी कार्यालयले गरेको भए पाँच वर्षमा पनि सक्ने थिएन भन्ने सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । ताप्लेजुङबाट गोलासम्म मोटरबाटो अझै पुगेको छैन । करिब दस वर्ष भयो यो सडक बनाउने भनेर नेपाल सरकारले थालेको तर बाटो आधा पनि बनेको छैन । तीस किलोमिटर बाटो बनेपछि मात्र ताप्लेजुङसँग ओलाङचुङगोला जोडिन्छ । त्यहाँ पनि कर्मचारी र ठेकदारको बेइमानी नै देखिन्छ । चीनबाट गोलासम्म आउने सडक कच्ची बनेको छ तर नेपालबाट गोलासम्म जाने बाटो बनेको छैन । यस्तो अवस्थामा त्यहाँका जनताको दैनिकी सम्बन्ध नेपाल सरकारसँग कसरी हुने ? चीन सरकारले हेर्ने कुरा मिलेन । यस्तोमा कस्तो पीडा होला त त्यहाँका जनतामा ? घरको अभिभावकले हेर्दैन । छिमेकीले हेर्न मिल्दैन बीचमा भोकै नाङ्गै कतिञ्जेल छटपटिएर सहेर बस्ने ? यो समस्या दक्षिणपट्टि सिमानामा हुँदैन । त्यहाँको पीडा अर्कै होला तर उत्तरपट्टिको जस्तो त पक्कै छैन । जाडो छ । हिउँले पुरिएको छ । खाने खास अन्न छैन । सदरमुकाम आउन साधन छैन । किनेर केही लैजाऊँ कति बोक्ने ? बाटो छैन । पढ्ने स्कुल छैन, हेल्थपोस्ट पनि छैन । आधा दर्जन घण्टा हिँडेपछि मात्र फेलापर्छ सवारीसाधन । छिमेकी देशको सिमानामा सबै चीज छ । हराभारा छ । यो हेरेर त्यहाँका जनतामा कस्तो वितृष्णा फैलेला त ? स्याबास छन् ती जनता आफूलाई गौरवसाथ नेपाली हाँै भनेर बसेका छन् । प्राकृतिक सुन्दरता छ । जडीबुटीको भण्डार छ । अविरल जलप्रवाह नदी गुञ्जिएका छन् । इमानदार जनता छन् । तर, दुःखी जीवन बिताउन बाध्य छन् । उत्तर सिमानाका ती जनताको उद्धार गर्नका लागि र नेपाललाई जलमार्गमा सजिलोसँग विकल्पको द्वार खोल्नका लागि उत्तरपट्टिका नाका मित्रराष्ट्र चीनको सहयोगमा चाँडो विस्तार गर्न अति जरुरी भइसकेको छ । चीनबाट नेपालमा आउने सबै सम्भव नाका खोलेर व्यापार र सामाजिक सम्बन्ध विस्तार गर्न वाञ्छनीय छ ।
यसै प्रसङ्गमा ओलाङचुङगोलामा करिब पाँच सय वर्ष अगाडिदेखि नै निर्मित तीनतले ऐतिहासिक दिकिछ्योलिङ गुम्बा अवस्थित छ । यो गुम्बा तिब्बतको अर्को गुम्बासँग निकट सम्बन्ध रहेको ऐतिहासिक भनाइ छ । यो गुम्बामा तिब्बतबाट आएका विभिन्न पुराताŒिवक वस्तुहरू पनि सङ्गृहित थियो । ती सवै पुराताŒिवक वस्तुहरू तत्कालीन राज्य संयन्त्रले लगेको स्थानीय बताउँछन् । पुराताŒिवक ती वस्तुको संरक्षण गर्नका निम्ति भन्दै स्थानीयलाई जानकारी नदिई हेलिकप्टरबाट ती वस्तु लिएर गएको स्थानीय र गुम्बासँग सम्बन्धित व्यक्ति बताउँछन् । तर, ती वस्तु हाल कहाँ राखिएको छ ? यो कुराको जवाफ भने कहीँबाट पनि प्राप्त भएको छैन । गुम्बामा अझै पनि बहुमहŒवका ग्रन्थ, वस्तुहरू छन् तर यसको संरक्षण गर्ने कुनै पनि संयन्त्र छैन । एकजना ज्येष्ठ नागरिक लामाको सामान्य रेखदेखमा छ । प्रथमतः यो गुम्बा नै एसियाको पुरानो गुम्बामध्ये एक हो । यो गुम्बा नेपालको पुरानो गुम्बा हो । यो गुम्बामा भएका वस्तु बहुमूल्य र प्राचीन छन् । यी पुराताŒिवक महŒवका छन् । यो संस्कृति, कला र धर्मसँग सम्बन्धित छ । यो चीन नेपालको मेैत्री सम्बन्ध र संस्कृतिसँग जोडिएको छ । यसको चाँडै व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसमा सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जाला त ? यसका कारण पनि ओलाङचुङगोला नाका चाँडै सुचारु गर्न जरुरी छ । जसले नेपालको भविष्यको व्यापार समुन्द्रसंग विकल्पको रूपमा जोडिन्छ । उत्तरपट्टिका धेरै नाका खोल्न आवश्यक छ । यो पनि तत्काल खोल्न जरुरी देखिन्छ ।
जैविक विविधताको दृष्टिले न�